Akukho mntu uya kukuxelela i-10 inyaniso malunga ne-Trenbolone Acetate | I-powder powder
/Blog/I-Trenbolone Acetate/Akukho mntu uya kukuxelela i-10 inyaniso malunga ne-Trenbolone Acetate
ezaposwa ngomhla 12 / 06 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Trenbolone Acetate. Ibe 1 Comment.
Yintoni i-Acetate yeTrenbolone? I-Trenbolone Work Acetate?
Yintoni i-trenbolone acetate esetyenzisiweyo?
Indlela yokusebenzisa i-Trenbolone Acetate?
Umlinganiselo we-Trenbolone Acetate.
I-Trenbolone Acetate Cycle
Iisisiseko eziSeko ze-Tetbolone Acetate
I-Tetbolone Advanced Acetate Cycles
Ziziphi iziphumo onokuzilindela kwiTrenbolone?
Ziziphi iinzuzo ze-Trenbolone Acetate?
Ziziphi iimpembelelo ezingasetyenziswayo ze-Trenbolone Acetate? Kuphi ukuthenga i-Trenbolone i-Acétate powder eluhlaza kwi-intanethi?
I-Trenbolone acetate i-powder video
Trenbolone acetate Abalinganiswa basisiseko:
igama: Trenbolone acetate
Yintoni i-Acetate yeTrenbolone?
I-Trenbolone yenye yezona zinto zinamandla kakhulu steroids maneka. Okona, yile enye yezona zinto zixhaphake kakhulu kuba isebenza kakuhle ngokukhwabanisa nokujikeleza ngokufanayo. Ukuba ucinga nge-Trenbolone Acetate kumjikelezo wakho ozayo, qiniseka ukuba uyawuqonda indlela yokuwusebenzisa ngokufanelekileyo ukuze uzigcine ukhuselekile.
Ngomqondo weekhemikhali, i-Trenbolone Acetate yinto eguquguqukayo encinane ye-nandrolone, i-molecule Deca Durabolin. Ngaloo ndlela, unokulindela ezininzi zezenzo ezifanayo. Nangona kunjalo, i-Tren Acetate ithatha iinguqulelo ezininzi ezenza ukuba zithandeke kakhulu. Okokuqala, le mveliso ayifuni i-aromatize, okanye iguquke kwi-estrogen kwigazi. Ezi ziindaba ezilungileyo kulabo baxhalabele ngakumbi kwi-androgenic iziphumo ze-steroids. Okwesibini, lithwala i-ester elifutshane elithetha ukuba liqala ukusebenza emva nje kokusetyenziswa. Inomdla-nxaxheba osebenzayo ngaphantsi kweentsuku ezintathu, ngoko-ke yonke i-dosing yemihla ihamba phambili.
I-Trenbolone Acetate njani umsebenzi?
I-IGF-1 yi-hormone eyenziwa ngokwemvelo eyenziwe ngeprotein. Unamandla kakhulu kwaye unempahla ene-anabolic eqinile. Idlala indima ebalulekileyo ekubuyiseni nasekuvuseleleni izicubu zesisu. Imiphumo ye-hormone esekelwe kwiprotheyini ibonakala inamandla malunga nayo yonke iseli emzimbeni womntu.
Iqinisa kwaye incedise ekubuyiseleni izicubu ze-muscle, i-cartilage, inkqubo ye-nervous central, i-ligaments kunye ne-tendon, kunye ne-pulmonary system.
Ngaphandle kokunyusa ukuveliswa kweeseli ezibomvu zegazi, i-trenbolone acetate mhlawumbi yinkomfa kuphela ekwazi ukutshiza imveliso ye-IGF-1 hormone. Ngenxa yoko, kunceda ekukhuthazeni ukunyamezela kwemizimba kunye nokukhuthaza ukukhawuleza kwezinga lokubuyisela.
Ngaphandle kwe-trenbolone acetate inqanda i-hormone ye-glucocorticoid, eneempembelelo ezahlukeneyo ze-anabolic steroids. Kwakhona kwaziwa ngokuqhelekileyo njenge-hormone yoxinzelelo, i-hormone ye-glucocorticoid iyaziwa ukuxhatshazwa kwezicubu zomzimba kwaye ikhuthaza ukunyusa amafutha. Ngokusebenzisa i-trenbolone acetate, imiphumo ye-hormone ye-glucocorticoid igcinwe isheke.
I-acetate yeTren iziphatha njengabantu abaninzi nezinye i-anabolic steroids. Iyakwandisa amandla omzimba wakho wokwenza iprotheni kwaye inceda izicubu zakho zomzimba zigcine i-nitrogen eninzi. Xa umzimba wakho unako ukudala iiprotheni ngokukhawuleza, kwaye xa isakhiwo sithintela ezo proteins (oko kukuthi i-nitrogen) ziyafumaneka ngobuninzi, unokufumana ukukhula kwemisipha kwinqanaba le-epic. Ngaphandle kwalokhu, i-Trenbolone Acetate iya kusebenza ekukhuthazeni i-insulin-like growth factor, enoxanduva lokulungisa kunye nokuvuselela izicubu emzimbeni wakho. Kananjalo kwandisa inani elibomvu legazi; kunye neeseli ezibomvu zegazi, unokuphucula ngakumbi i-oxygenate imisipha yakho kwaye ubonelele ngendawo ebalulekileyo yokukhula.
I-Tetbolone Acetate yayiqala ukufumaneka njengemveliso yezilwanyana Isifakela, esingekho. Abasebenzisi be-Steroid baye bathabatha i-trenetolol acetate evela kwi-Impapants ye-ng'ombe yaseFinaplix ngokusebenzisa iikiti zokuguqula. Njengamanje, amalungiselelo ahlukeneyo angenalo amayeza ayathengiswa ngeelabhu zangaphantsi (i-UGLs), kwaye abaninzi abasebenzisi bathenga i-acetate e-powdol acetate kwaye benza izilungiso zabo ezinokutsha.
I-solbility ye-trenbolone acetate kwioli yemifino i-50 mg / mL. Apho kusetshenziselwa ukuphucula izityalo ezifana ne-benzyl alcohol okanye i-benzyl benzoate, ukufikelela kwe-75-100 mg / mL kuya kufumaneka, kwaye oku kufana nokulungiselela amalungiselelo ebhabhile phantsi komhlaba. Noko ke, ukungalungi, nangona kunjalo, kwiimilinganiselo eziphezulu kune-50 mg / mL kukuba kunokunyuka ukwanda kwe-"khola" - ukukhwehlela okufutshane kodwa kunzima ngokukhawuleza mhlawumbi ngomzuzu emva kokufakela ijoyi, ngokuqhelekileyo kuhamba kunye nokuqubuka okukhulu. Nangona kunjalo nakwii-concentrations eziphezulu, kubabasebenzisi abaninzi banengxaki yeso sihlandlo, kungekhona kwimijojo. Nangona i sizathu sokuqwalasela umda wokuncincika xa ukhetha ukulungiselela, akusizathu esaneleyo sokulawula imveliso ye-trenbolone e-pre-prepared XTUMX-75 mg / mL.
I-Trenbolone yi-steroid eneenzuzo zokungabikho kwemetabolism engathandekiyo, ingabandakanywa ne-aromatase okanye i-5alpha-reductase; lokuba yiClass i-steroid enamandla kakhulu ebophelela kakhulu kwi-androgen receptor; kunye nokuba ne-half-half life of about one day. Ipropati yokugqibela yenza ukuba luncedo kakhulu kumjikelezo omfutshane, njengoko ukuguqulwa kwamanqanaba egazi asebenzayo kwi-anabolically kumanqanaba aphantsi ngokwaneleyo ukuze aphucule ngokukhawuleza.
Amashumi amahlanu ama-milligram ngosuku ngosuku lwe-trenbolone acetate yinto efanelekileyo kumntu othile kumjikelezo wakhe wokuqala okanye ongaphantsi kwe, uthi, iiplani ze-20 ngaphezu komda wendalo; ngelixa i-100 mg / ngosuku ingakhethwa ngumsebenzisi ogqithiseleyo osufumene ngaphezulu koku. Kwiimeko ezimbalwa, amanani aphantsi nje nge-35 mg / ngosuku unokukhethwa ngenxa yomsebenzisi onokungaqondakali okungavamile kwilisi ngokuphathelele ukukhupha ebusuku okanye ukunyusa kwe-CNS.
Nangona ezi zibonakala ngathi ziphantsi kweelayidi - kunye nayiphi na enye injectable ziza kuba ziphantsi kweeDiski njenge-sole Class I androgen-trenbolone iphindwe kathathu ngokuphumelelayo nge-milligram kunezona zininzi zijojane kwi-androgen receptor. Ngaloo ndlela, i-50 mg / imihla ye-trenbolone, idibene ne-dose esebenzayo yeClass II steroid efana ne-50 mg / imini ka-Dianabol, yenza i-stack esebenza kakuhle nangona i-milligram yenani ngeliveki lihlambulukile.
I-Trenbolone iphakathi kwama-androgens asebenzayo ekuncediseni ukulahlekelwa kweoli. Kodwa ngokuchasene namanye amabango, akukho nxaxheba ekhethekileyo ye-acetate ester: ezinye i-esters ze-trenbolone zisebenza ngokulinganayo.
Umlinganiselo we-Trenbolone Acetate
Umlinganiselo we-Trenbolone Acetate dose uhluka ngokusekelwe kumjikelezo wakho kunye nokugcina. Ngethuba lokujikeleza kwexesha le-off-season, abaninzi abaqulunqa umzimba bafumana ukuba i-50mg yonke imihla ikhululekile kwaye isebenza kakuhle. Amanye amadoda anyanzelekile ukuya kwi-100mg yonke imihla ngaphandle kwemiba, kwaye afumanisa ukuba oku kunika iziphumo ezilungileyo kubo. Ngethuba lokujikeleza, abantu bavame ukunyusa imvulophu ngakumbi ngeTren kwaye basebenzise amanani angaphezulu kwe-100mg yonke imihla, kodwa kungekhona wonke umntu onokunyamezela oku umngcipheko weempembelelo zecala ukwanda. Akukho mntu omele asebenzise ngaphezu kwe-200mg yonke imihla, nangona kubonakala ngathi uyayinyamezela.
Umjikelezo we-Trenbolone I-Acetate umjikelezo unokuba yinto ebangela umdla umjikelezo we-anabolic steroid nawuphi na umntu onokuziceba. Le yindlela enamandla kakhulu kunye ne-anabolic steroid enobuchule kakhulu esebenza kakhulu kunokuba nezinye i-steroids ezininzi zihlanganiswe ndawonye. Nangona oko kukhangayo, sinentetho edidekayo kwabanye; abanye abayi kukwazi ukuphatha umjikelezo we-Trenbolone Acetate. Amanye amadoda awawunyamezeli i-hormone yeTrenbolone kakuhle kwaye ngelixa kungenakulungele ukuba yindlela nje. Nangona kunjalo, amaninzi amadoda aya kuvuya nalo hormone, kwaye ngokuqinisekileyo umjikelezo we-Trenbolone Acétate umjikelezo onokwenene unokufezekiswa.
I-trenbolone acetate yenye yezona zinto zikhoyo kwaye zilula ukulawula zonke iifom zeTren kwaye ngoko ke enye yeyona ndlela iphakanyisiwe. Xa usebenzisa le steroid, akufuneki ukuba usebenzise iTrenbolone Hexahydrobencylcarbonate okanye iTrenbolone-Enanthate ukuphumeza iziphumo ezilungileyo nangona ukhululekile ukuzisebenzisa.
Ifom ye-Acetate yinkqubo engcono kakhulu kunye neTren Umjikelezo onokuyisebenzisa xa usondla, okanye ngexesha lokukhula. Nangona kunjalo, kusebenza ngokulinganayo ngexesha lembini. Ngokumangalisayo, i-Trenobolone acetate ingasetyenziselwa ngabaphuculisi bokusebenza ngexesha lemijikelezo emininzi kungakhathaliseki injongo.
Nangona oku kubizwa njengomjikelo oyisiseko, imbambano yolu mbandela kukuba iphumelela kwaye ayikho nto ibonisa ubuthathaka. Lo mjikelo uya kuba yinto efanelekileyo yokuba umqali angakhange athethe ukuba kuya kuba nzima kunokuba baninzi abaya kufuna.
Umjikelezo oyisiseko uya kuhlala uquka ukusetyenziswa kwe testosterone ukusuka kwi-hormone yeTren ngokuqhelekileyo ukunyanzelisa ukuveliswa kwe testosterone yemvelo. Enyanisweni, sincoma ukusebenzisa i-testosterone ngawo onke amajikelezo e-Trenbolone ukuxhasa inani elincinane lefomu lemvelo emzimbeni.
Ngexesha lomjikelezo oyisiseko, umlinganiselo ofanelekileyo kufuneka ube ngu-50mg ngalunye usuku, yonke imihla ehambayo. Oku kungaguqulelwa kwi-75mg yonke imihla ehambayo xa umzimba wakho ubonisa ukunyamezela i-50mg dosage. Kwiimeko eziqhelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokusetyenziswa liqhelekileyo kwiiveki ze-8 nangona iiveki ze-12 nazo zamkelekile kungakhathaliseki ukuba idosi esetyenziswayo. Qaphela ukuba, iphakamileyo le dose liphakamileyo umngcipheko wemiphumo ebalulekileyo ukuze ufunde le nqaku ukuze ufunde indlela yokuphepha yonke imiphumo emibi yeTren A.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukusebenzisa i-steroid kwiiveki ze-12, kulungile ukuba namava athile usebenzisa i-hormone okanye uthathe inxaxheba kumncintiswano othile okanye injongo ethile. I-steroid igcina kakuhle kakuhle kunye no-Dianabol kunye ne-testosterone ngexesha lojikelezo xa ungenayo imisebenzi ethile. I-Tren inokuthi ifake kakuhle kunye ne-testosterone okanye enye i-anabolic steroids equka u-Anavar no-Winstrol ngexesha lokunquma.
Ukuba unamava nge-steroid, umjikelezo ophezulu uya kuba kuhle kuwe. Iqala nge-100mg yonke imihla ehambayo kodwa kwiimeko ezininzi, kunokwenzeka ukutshintshisa amanqanaba omlinganiselo kwi-100mg ngalunye ngexesha lokusetyenziswa.
Kodwa akucebisi ukuba usebenzise i-trenbolone acetate imihla ngemihla ukuba ungumdlali wexesha elidlulileyo njengokuba oku kuza kubangela ukunyanzeliswa komzimba ongeyomfuneko. Nangona kunjalo, unokusebenzisa i-100mg yemihla ngemihla ngexesha lokutya kwaye ngokukodwa kufutshane nemincintiswano yakho.
Umjikelo ongcono weTrenbolone kwixesha elikude liya kuba 100mg yonke imihla ephumayo kwaye unokudibaniswa kakuhle kunye neTestosterone kunye neDbol. Indlela edibeneyo isinconywa kubasebenzisi abaphambili, oko kuthetha ukuba unako ukuxhasana ne-Deca-Durabolin kunye ne testosterone kwiiveki ze-12.
Ukunyuka kwemeteorological kwi-Tren idume ngokugqithiseleyo ekuqwalaseleni ukuba kuqhathaniswa nokuqhathaniswa kwe-testosterone. Uphando lwezonyango luye lwabonisa ukuba i-Trenbolone ingaphaya kwe testosterone phantse zonke iiparameter zokuthelekisa.
Iimpembelelo zayo ze-anabolic zibonakala zibala ngokwezinga elincinci, ezenza ukuba umthamo ophezulu kakhulu wezilwanyana ezincinci, kwaye kubonakala kunika umzimba ithuba lokugcina ubunzima bemisipha xa ubhekene nokulahleka kwekhalori. Zomibini ezi ziphumo zi no kubakho kwiTrenbolone ukukwazi ukubopha kunye ne-Androgen Reactor (AR) kathathu izinga le testosterone. Kwakhona kwandisa ukugcinwa kwe-nitrogen kunye neprotheni ekuqaleni kwimisipha.
I-Tren yandisa i-metabolism kwaye ibonakala inokukwazi ukugqithisa amanqamle ephezulu, kubandakanywa nokuba ne-visceral adipose tissue. Iziphumo ekupheliseni amafutha zilingana nomyinge owenziweyo. I-Tren iyabonwa ngokubanzi nje ngokuba yinqanaba elidlulileyo le-fat ever ever created.
Kwakhona akukho nxalenye yeempembelelo zecala xa kuthelekiswa ne testosterone. Amanani ase-hemoglobin ephakamileyo kunye nokubala okubomvu kweeseli azizange zibonwe. Ezinye iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ezifana ne-bone de-mineralized kunye neprotrate ekhulisiweyo nayo ingabikho ngokucacileyo.
The enye inzuzo yokuba iTrenbolone inokuthi ayifuni kwisimo se-estrogen, ngaloo ndlela idlula zonke iingxaki ezivela kuyo njengokuphuhliswa kwamabele, i-acne kunye nesikhumba seoli.
I-Trenbolone ayikwazi ukuthathwa ngomlomo kuba ifunyanwa kuphela ngokuthengisa njengencediso yeenjongo zezilwanyana. Ukusetyenziswa ngokukhuselekileyo ngabantu, i-Tren kufuneka ikhutshwe kwifom ye-pellet yangaphambili kwaye iguqulwe ukusetyenziswa kwabantu ngokufaka izibophelelo ezingekho zinobungozi. Xa senziwe ngokufanelekileyo, oku kwenza i-Tren ikhuselekile kwi-injection kubantu.
I-Tren ithathwa njengenxalenye 'yomjikelezo' owaziwa njengeTren Cycle. 'Umjikelo' udibaniso lwamachiza athatyathwe ukuba ahambelane kunye neempembelelo zabo. I-Tren Cycle ifumana iziphumo ezibalaseleyo kuba oko kusebenza kakhulu kokubili ukukhuthaza ubunzima bemisipha nokukhupha amanqatha amaninzi.
Ukulawulwa kunye nokuguqulwa kweTren Cycle kunceda abantu ukuba bagxininise ngaphambili okanye ekupheleni kweemfuno zabo. Kukho iindidi zeCycle, ukusuka kwi-Basic to Advanced, ukutya kwiimbaleki ezineentlungu ezahlukeneyo kunye neziphumo ezifunwayo zeTrenbolone.
I-Tren inconywa kuphela amadoda kunye nabasetyhini kufuneka bayigweme. Amadoda kufuneka aqale ngawo kuphela ukuba athathe i-anabolics ngaphambili. Umlinganiselo osemgangathweni uphakathi kwe-50mg kunye ne-100mg yonke imihla. I-100mg yinto eqhelekileyo kunye neyona mfuno ebalulekileyo kunoma ubani. Amanani aphezulu aqhelekileyo asetyenziswa kwisigaba sokusika.
Esinye isizathu sokuba uqwalasele ukusebenzisa i-Trenbolone Acetate ngenxa yezibonelelo zayo ezininzi ezibandakanya oku kulandelayo:
Ukwandisa amandla omzimba: Iziphumo eziphezulu kunye neerrogenic Ikhokelela ekukhuleni okukhawulezileyo kwemisipha kunye nobunzima. Ukutshabalalisa: Kwakhona kunceda ekutshiseni iikhalori kunye nokuphelisa iiseli ezinamafutha ngokuzibophelela kwiiseli ezinamafutha.Iziphumo ezinamandla: I-effect ne-androgenic inceda ekunqumeni ngelixa lifanayo liphucula umgudu wakho.
Akukho ncitshisiweyo: I-steroid ayiguquki kwi-estrogen kwaye akukho zisele ze-muscle ziya kutshiswa.
Ukusebenza ngokufanelekileyo: Ufuna umthamo omncinane weTrenbolone xa uthelekiswa nezinye iindlela. Unokutshintsha iindidi ngokuxhomekeke kwiminqweno yakho. Ngokomzekelo, i-Tren A (i-Tet Acetate) ine-half half life (iintsuku ze-3) ngokuthelekiswa neTren E (iTren Trenbolone Enanthate).
Nangona i-Trenbolone ingafumaneka kwifom yomlomo, uya kuba neziphumo ezilungileyo ngokuya kwi-variant injection. Oku kungenxa yokuba ngokukhawuleza kwaye kulula ukungena emzimbeni kwaye iya kuqala ukusebenza ngokukhawuleza. Umngcipheko wokuba enye ilahleke kwinkqubo yokugaya iyancitshiswa.
Imilinganiselo ephakanyisiweyo ye-Trenbolone Acetate iphakathi 300mg kunye ne700mg ngeveki. Njengawo nawuphi na umgangatho wesongezelelo se-steroid okanye ukwakha umzimba, kufuneka uhambe kuphela kwiTrenbolone yemvelo kunye nomthetho njengoko oku kunciphisa nayiphi na imiphumo emibi.
Ziziphi iimpembelelo ezingasetyenziswayo ze-Trenbolone Acetate?
Icandelo lokusebenzisa i-Tetbolone Acetate ngempumelelo libandakanya ukuqonda nokukhusela iziphumo zalo, xa kunokwenzeka. Ezi ziphumo zempembelelo zingahlukana zibe zibala kwaye zizinzima.
Ukuxhamla - Nakuba iziphumo zecala ze-estrogenic ezinjenge-gynecomastia zinokubonakala zilula kodwa zilula, zilula ngokwaneleyo ukunciphisa ngokusebenzisa i-aromatase inhibitor njenge-Arimidex ngexesha lomjikelezo wakho. Lo mfuneko.
Ikhumba elinamafutha kunye ne-acne - Akunabo bonke abantu abaya kuba neempembelelo, kwaye abaninzi balabo bafumanisa ukuba i-acne ayiyikhathazi. Ayikwazi ukunciphisa, kodwa ungayiphatha ngeemveliso ezingaphezulu kwee-counter equkethe izithako ezifana ne-benzoyl peroxide okanye i-salicylic acid.
Ubungqina - Lo ngenye imiphumo yecala engenakukhutshwa ngamadoda athile. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Trenbolone i-Acetate baldate ayichaphazeli wonke umntu - ichaphazela kuphela amadoda aphethwe ngumzimba. Ngokucacileyo, i-Tren iyakwazi ukukhawuleza okanye iququzelele ukulahleka kweenwele ezisekho ngaphambili, kodwa ayibangeli ngqo.
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu - I-Tren kunye ne-steroids efana nayo inokwandisa ngokunyanisekileyo uxinzelelo lwegazi. Nangona oku akuyona ingxaki ukuba ngaba unempilweni enempilo, amadoda asele sele enegazi eliphezulu kufuneka agweme i-Trenbolone Acetate.
Ukuqhaqhazela - Abanye abantu baya kuba nokulala, kwaye oku kuya kuluhlu lube lukhuni lube lukhulu. Ngokomzekelo, ngelixa abanye amadoda bekwazi ukusebenzisa i-diphenhydramine ngosuku okanye ezimbini ukuze balele, abanye abantu abanakufumana ukukhululeka kuzo zonke iintsuku. Le ngxaki yokunyamezela, kwaye inokuphetshwa ngokunciphisa umthamo wakho.
Ukukhupha ebusuku - Abanye abantu banokuvavanya ebusuku ngenxa yokutshintsha kwe-hormone, kwaye ngoku kudla ngokuba ngumqondiso obuninzi obuninzi be-estrogen. Ukusebenzisa i-aromatase inhibitor inokuyithintela.
Iingxaki zesondo - Xa zisetyenziswe kwiqondo eliphezulu okanye ngaphezu kwexesha elide, i-Trenbolone ingabangela ukungasebenzi kwe-erectile okanye ukungabikho kwe-libido. Kweminye, ukunciphisa umthamo kunciphisa le mpawu. Kwabanye, i-Tren ayinakunyamezela naluphi na umthamo.
I-trenbolone acetate yenye yezona zixhaphakileyo, zinamandla kakhulu, kwaye zithandwa kakhulu kwi-anabolic steroids etholakala kuluntu. Ihambelana kakuhle phantse nayiphi na umjikelo okanye ugcini, kwaye iziphumo zayo azifani. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba iTren ayikho yabaqalayo; kufuneka usebenzise kuphela ukuba unamava amnandi ngebhayisikili anabolic steroids.
Kuphi ukuthenga i-Trenbolone i-Acétate powder eluhlaza kwi-intanethi?
I-Trenbolone I-Acetate ipowder eluhlaza yinto ethandwa kakhulu yi-anabolic steroid, kwaye kufuneka ifunyanwe lula kwi-market ye-anabolic steroid emnyama ngaphandle kwemizamo. Kuqheleke kakhulu kwaye kulula ukuveliswa ukuba kufuneka ifumaneke kwixabiso elifanelekileyo kakhulu. I-trenbolone I-Acetate ipowder eluhlaza ikhona njengemveliso yamabanga ebakala e-bakala abantu, kunye nemveliso yebhanki yehlabathi (UGL) kwimakethi. Ukwahluka kubonakala apha, kunye nokulawulwa kwekhwalithi yimiba ephambili, kwaye ibakala leyezabisi iTrenbolone Acétate powder eluhlaza ngokuqhelekileyo libiza kakhulu ngenxa yezizathu ezicacileyo.
I-Trenbolone I-Acetate ipowder eluhlaza ingathengwa kwimithombo ye-intanethi kunye nabathengisi, kunye nokuthengiswa kwendabuko kumntu (oko kukuthi 'i-gym-dealers'). Ixabiso liyahluka. La mayeza I-Trenbolone i-Acetate ipowder eluhlaza inokufumaneka kwi-USD4500-USD6000 / kg.Ukuba ukhetha ipowder. Iimodeli zesampula zinokuyalelwa ukuba uvavanye loo mveliso ukuze ukwazi ukugcina ixesha elininzi kunye nemali.
Filipa Tavares12 / 06 / 2017 kwi-10: 18 ntambama
Mholo Ndabona iwebhusayithi yakho kwaye ndicinga ukuba inkulu kakhulu kwaye icinga.
Qhubeka wenze izinto ezinkulu!
Kuphi ukuthenga i-Testosterone Ukuphucula i-powder eluhlaza kwi-intanethi? I-Primo (i-Methenolone Acetate) enye ye-anabolic steroid ekhuselekileyo yabesifazane